Backlinking ဆိုတာ ဘာလဲ သင့် Domain ကို အန္တရာယ်မဖြစ်စေဘဲ Quality Backlinks ကို ဘယ်လိုထုတ်လုပ်မလဲ။ Martech Zone
သောကြာနေ့, ဧပြီ 1, 2022 သောကြာနေ့, ဧပြီ 1, 2022 Douglas Karr
တစ်စုံတစ်ယောက်ရဲ့ စကားကို ကြားလိုက်ရတဲ့အခါ website ရဲ့ backlink အလုံးစုံ ဒစ်ဂျစ်တယ် စျေးကွက်ရှာဖွေရေး ဗျူဟာ၏ တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းအနေဖြင့်၊ ကျွန်ုပ်သည် တုန်လှုပ်သွားတတ်သည်။ ဘာကြောင့်လဲဆိုတာကို ဒီပို့စ်မှာ ရှင်းပြမယ် ဒါပေမယ့် သမိုင်းကြောင်းတချို့နဲ့ စချင်ပါတယ်။
တစ်ချိန်က၊ ရှာဖွေရေးအင်ဂျင်များသည် လမ်းညွှန်တစ်ခုကဲ့သို့ပင် အဓိကအားဖြင့် တည်ဆောက်ပြီး အမိန့်ပေးသည့် လမ်းညွှန်ကြီးများဖြစ်ခဲ့သည်။ Google ၏ Pagerank Algorithm သည် အရေးပါမှုတစ်ခုအနေဖြင့် ဦးတည်ရာစာမျက်နှာသို့ လင့်ခ်များကို အသုံးပြုထားသောကြောင့် ရှာဖွေမှုအခင်းအကျင်းကို ပြောင်းလဲခဲ့သည်။
ယေဘူယျလင့်ခ် (Anchor tag) သည် ဤကဲ့သို့ ဖြစ်သည်-
ရှာဖွေရေးအင်ဂျင်များသည် ဝဘ်ကို စူးစမ်းလေ့လာပြီး လိုရာခရီးများကို ဖမ်းယူသောအခါ၊ ၎င်းတို့သည် ဦးတည်ရာသို့ ညွှန်ပြနေသည့် လင့်ခ်များ မည်မျှရှိသည်ကို အခြေခံကာ ရှာဖွေရေးအင်ဂျင်ရလဒ်များကို အဆင့်သတ်မှတ်ပေးသည်၊ မည်သည့်သော့ချက်စာလုံး သို့မဟုတ် စကားစုများကို အသုံးပြုထားသည်၊ ဦးတည်ရာ စာမျက်နှာတွင် အညွှန်းပြုထားသော အကြောင်းအရာနှင့် ထိမ်းမြားလက်ထပ်ခြင်း .
Backlink ဆိုတာ ဘာလဲ
ဒိုမိန်းတစ်ခု သို့မဟုတ် ဒိုမိန်းခွဲတစ်ခုမှ သင့်ဒိုမိန်းသို့ သို့မဟုတ် သီးခြားဝဘ်လိပ်စာတစ်ခုသို့ ဝင်လာသည့် ဟိုက်ပါလင့်ခ်တစ်ခု။
ဘာကြောင့် Backlinks အရေးကြီးတာလဲ။
အဆိုအရ ပထမစာမျက်နှာ Sageဤသည်မှာ ရှာဖွေရေးအင်ဂျင်ရလဒ်စာမျက်နှာရှိ ရာထူးအလိုက် ပျမ်းမျှ CTRs များဖြစ်သည် (SERP):
ဥပမာတစ်ခုပေးကြည့်ရအောင်။ Site A နှင့် Site B နှစ်ခုလုံးသည် ရှာဖွေရေးအင်ဂျင်အဆင့်အတွက် ပြိုင်ဆိုင်နေကြသည်။ အကယ်၍ Site A တွင် backlink anchor text ရှိ သော့ချက်စကားလုံးဖြင့် ၎င်းကို ညွှန်ပြသော လင့်ခ် 100 ရှိပြီး Site B တွင် ၎င်းကို ညွှန်ပြသော လင့်ခ် 50 ရှိပါက Site A သည် ပို၍အဆင့်မြင့်မည်ဖြစ်သည်။
ရှာဖွေရေးအင်ဂျင်များသည် မည်သည့်ကုမ္ပဏီ၏ ဝယ်ယူမှုဗျူဟာအတွက်မဆို အရေးကြီးပါသည်။ ရှာဖွေရေးအင်ဂျင်အသုံးပြုသူများသည် ဝယ်ယူမှု သို့မဟုတ် ဖြေရှင်းချက်တစ်ခုအား သုတေသနပြုလုပ်ရန် ၎င်းတို့၏ရည်ရွယ်ချက်ကိုပြသသည့်သော့ချက်စကားလုံးများနှင့် စကားစုများကို အသုံးပြုနေကြသည်... နှင့် သင်၏အဆင့်သတ်မှတ်ချက်သည် ကလစ်နှိပ်ခြင်းနှုန်းများအပေါ် သိသိသာသာသက်ရောက်မှုရှိသည် (CTR နည်း) ရှာဖွေရေးအင်ဂျင်အသုံးပြုသူများ။
စက်မှုလုပ်ငန်းသည် အော်ဂဲနစ်ရှာဖွေအသုံးပြုသူများ၏ မြင့်မားသောပြောင်းလဲခြင်းနှုန်းကို သတိပြုမိသည်... နှင့် နောက်ဆက်တွဲလင့်ခ်များထုတ်လုပ်ရန် လွယ်ကူမှုတို့ကြောင့် နောက်ဘာဆက်ဖြစ်မည်ကို သင်စိတ်ကူးကြည့်နိုင်သည်။ $5 ဘီလီယံစက်မှုလုပ်ငန်းပေါက်ကွဲပြီးမရေမတွက်နိုင်သော SEO အေဂျင်စီများစျေးဆိုင်ဖွင့်လှစ်ခဲ့သည်။ လင့်ခ်များကိုခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာသည့်အွန်လိုင်းဝဘ်ဆိုက်များသည် ဒိုမိန်းများကို အမှတ်ပေးခဲ့ရာတွင် ရှာဖွေရေးအင်ဂျင်ကျွမ်းကျင်ပညာရှင်များသည် ၎င်းတို့၏ဖောက်သည်များကို အဆင့်မြှင့်တင်ရန် လင့်ခ်များအတွက် အကောင်းဆုံးဆိုဒ်များကို ရှာဖွေဖော်ထုတ်ရန် သော့ချက်ဖြင့် ရှာဖွေရေးအင်ဂျင်ကျွမ်းကျင်သူများကို ပံ့ပိုးပေးပါသည်။
ရလဒ်အနေနဲ့ ကုမ္ပဏီတွေ ပေါင်းစည်းခဲ့ပါတယ်။ လင့်ခ်တည်ဆောက်မှုဗျူဟာများ backlinks များထုတ်လုပ်ရန်နှင့် ၎င်းတို့၏အဆင့်ကိုမြှင့်တင်ရန်။ နောက်ခံလင့်ခ်များကို ကုမ္ပဏီများက ရိုးရှင်းစွာ ပေးဆောင်သောကြောင့် နောက်ခံလင့်ခ်ချိတ်ခြင်းသည် သွေးအားကစားဖြစ်လာပြီး ရှာဖွေရေးအင်ဂျင်ရလဒ်များ၏ တိကျမှု ကျဆင်းသွားသည်။ အချို့သော SEO ကုမ္ပဏီများသည် အသစ်များကို ပရိုဂရမ်ဖြင့် ထုတ်ပေးပါသည်။ link စိုက်ခင်းများ ၎င်းတို့၏ဖောက်သည်များအတွက် backlink များကိုထိုးသွင်းရန်မှလွဲ၍ လုံးဝတန်ဖိုးမရှိပါ။
Google Algorithms နှင့် Backlinks Advanced
Backlink ထုတ်လုပ်မှုဖြင့် အဆင့်သတ်မှတ်ခြင်းဆိုင်ရာ ဂိမ်းကစားခြင်းကို ဟန့်တားရန် algorithm ပြီးနောက် Google မှ အယ်လဂိုရီသမ်ကို ထုတ်ပြန်သောအခါ တူသည် ပြုတ်ကျသွားသည်။ အချိန်ကြာလာသည်နှင့်အမျှ၊ Google သည် backlink အလွဲသုံးစားမှုအများဆုံးရှိသည့်ကုမ္ပဏီများကိုပင် ရှာဖွေဖော်ထုတ်နိုင်ခဲ့ပြီး ၎င်းတို့ကို ရှာဖွေရေးအင်ဂျင်များတွင် မြှုပ်နှံထားသည်။ လူသိရှင်ကြား လူသိအများဆုံး ဥပမာတစ်ခုမှာ JC Penney ဖြစ်ပြီး SEO အေဂျင်စီတစ်ခုကို ငှားရမ်းထားသည်။ ၎င်း၏အဆင့်ကိုတည်ဆောက်ရန် backlinks များဖန်တီးခြင်း။. ဒါပေမယ့် ဖမ်းမမိတဲ့ ထောင်နဲ့ချီတဲ့ သူတွေလည်း ရှိသေးတယ်။
Google သည် ရှာဖွေရေးအင်ဂျင်ရလဒ်များ၏ တိကျမှုကို မြှင့်တင်ရန်အတွက် အတုပြုလုပ်ထားသော စနစ်အား ဆက်တိုက်တိုက်ပွဲဝင်နေပါသည်။ ယခုအခါ Backlinks များသည် site ၏ဆက်စပ်မှု၊ ဦးတည်ရာ၏အကြောင်းအရာနှင့် keyword ပေါင်းစပ်မှုအပြင် domain quality တို့ကို အခြေခံ၍ တွက်ဆထားပါသည်။ ထို့အပြင်၊ သင်သည် Google သို့ အကောင့်ဝင်ထားပါက၊ သင်၏ ရှာဖွေရေးအင်ဂျင် ရလဒ်များသည် သင်၏ ရှာဖွေမှုမှတ်တမ်းအတွက် ပထဝီဝင်နှင့် အပြုအမူအရ ပစ်မှတ်ထားနေပါသည်။
ယနေ့တွင်၊ အာဏာပိုင်မရှိသောဆိုဒ်များတွင် အရိပ်အယောင်လင့်ခ်များစွာကို ထုတ်လုပ်နိုင်နေပြီဖြစ်သည်။ ပျက်စီးဆုံးရှုံးမှု သင့်ဒိုမိန်းက ၎င်းကိုကူညီမည့်အစား ကံမကောင်းစွာဖြင့်၊ အဆင့်မြှင့်တင်ထားသော အဆင့်ကိုရရှိရန် ကုသနည်းအဖြစ် backlinks များကို အာရုံစိုက်သည့် ရှာဖွေရေးအင်ဂျင် ပိုမိုကောင်းမွန်အောင် ကျွမ်းကျင်ပညာရှင်များနှင့် အေဂျင်စီများ ရှိနေသေးသည်။ လွန်ခဲ့သောလအနည်းငယ်က ကျွန်ုပ်သည် အဆင့်သတ်မှတ်ရန် ရုန်းကန်နေရသော အိမ်ဝန်ဆောင်မှု သုံးစွဲသူတစ်ဦးအတွက် backlink စာရင်းစစ်တစ်ခု ပြုလုပ်ခဲ့ပြီး အဆိပ်သင့်သော နောက်ခံလင့်ခ်များစွာကို တွေ့ရှိခဲ့သည်။ ပြီးနောက် disavow ဖိုင်ကို ဖန်တီးပြီး အပ်လုဒ်တင်ခြင်း။ Google အတွက်၊ ၎င်းတို့၏ အလုံးစုံ အော်ဂဲနစ်အဆင့်သတ်မှတ်ချက်နှင့် ဆက်စပ်နေသော လမ်းကြောင်းများတွင် သိသိသာသာ တိုးတက်မှုကို စတင်တွေ့မြင်နေရပါသည်။
ယနေ့တွင်၊ backlinking သည် သင့်အမှတ်တံဆိပ်၏ အော်ဂဲနစ်ရှာဖွေမှုမြင်နိုင်စွမ်းကို မထိခိုက်စေဘဲ အထောက်အကူဖြစ်စေမည့် backlink တစ်ခုကို ထုတ်လုပ်ကြောင်း သေချာစေရန် ဂရုတစိုက် သုတေသနနှင့် ကြိုးစားအားထုတ်မှုများစွာ လိုအပ်ပါသည်။ ဒီ 216 digital မှ ကာတွန်း ထိုဗျူဟာကို သရုပ်ဖော်သည်-
Backlinks အားလုံးကို ညီမျှစွာ ဖန်တီးထားခြင်းမဟုတ်ပါ။
နောက်ခံလင့်ခ်များတွင် သီးခြားအမည် (အမှတ်တံဆိပ်၊ ထုတ်ကုန် သို့မဟုတ် လူတစ်ဦး)၊ တည်နေရာနှင့် ၎င်းတို့နှင့် ဆက်စပ်နေသော အဓိကစကားလုံး (သို့မဟုတ် ယင်းတို့ကို ပေါင်းစပ်မှုများ) ရှိနိုင်သည်။ ချိတ်ဆက်နေသည့် ဒိုမိန်းသည် အမည်၊ တည်နေရာ သို့မဟုတ် သော့ချက်စကားလုံးအတွက် ဆက်စပ်မှုရှိနိုင်သည်။ အကယ်၍ သင်သည် မြို့တစ်မြို့၌ အခြေစိုက်ပြီး ထိုမြို့အတွင်းတွင် (နောက်ကြောင်းပြန်လင့်ခ်များဖြင့်) လူသိများသော ကုမ္ပဏီဖြစ်ပါက သင်သည် ထိုမြို့၌ အဆင့်အတန်းမြင့်မားသော်လည်း အခြားသူများမဟုတ်ပေ။ အကယ်၍ သင့်ဆိုဒ်သည် ကုန်အမှတ်တံဆိပ်အမည်တစ်ခုနှင့် ဆက်စပ်နေပါက၊ သင်သည် အမှတ်တံဆိပ်နှင့် ပေါင်းစပ်ထားသောသော့ချက်စာလုံးများပေါ်တွင် အဆင့်ပိုမြင့်သွားဖွယ်ရှိသည်။
ကျွန်ုပ်တို့သည် ကျွန်ုပ်တို့၏ဖောက်သည်များနှင့်ဆက်စပ်သော ရှာဖွေမှုအဆင့်သတ်မှတ်ချက်များနှင့် အဓိကစကားလုံးများကို ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာသည့်အခါ၊ ကျွန်ုပ်တို့သည် မည်သည့်အမှတ်တံဆိပ်-သော့ချက်စကားလုံးပေါင်းစပ်မှုများကိုမဆို ခွဲခြမ်းစိပ်ဖြာပြီး ကျွန်ုပ်တို့၏ဖောက်သည်များသည် ၎င်းတို့၏ရှာဖွေမှု မည်မျှကြီးထွားလာသည်ကို သိနိုင်ရန် အကြောင်းအရာများနှင့် တည်နေရာများကို အာရုံစိုက်ပါသည်။ အမှန်မှာ၊ ရှာဖွေမှု အယ်လဂိုရီသမ်များသည် တည်နေရာ သို့မဟုတ် အမှတ်တံဆိပ်မပါဘဲ ဆိုက်များကို အဆင့်သတ်မှတ်ခြင်းဖြစ်သည်ဟု ယူဆရန် လက်လှမ်းမမီနိုင်သော်လည်း ၎င်းတို့နှင့် နောက်ကြောင်းပြန်ချိတ်ဆက်ထားသော ဒိုမိန်းများသည် သီးခြားအမှတ်တံဆိပ် သို့မဟုတ် တည်နေရာတစ်ခုနှင့် သက်ဆိုင်မှုနှင့် အခွင့်အာဏာရှိသောကြောင့် ဖြစ်သည်။
ကိုးကားချက်များ- Backlink ကိုကျော်လွန်
၎င်းသည် ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာ backlink ဖြစ်ရန်ပင်လိုတော့သည်လား။ ကားအညွှန်း ရှာဖွေရေးအင်ဂျင် အယ်လဂိုရီသမ်များတွင် ၎င်းတို့၏အလေးချိန် မြင့်တက်လာသည်။ ကိုးကားချက်ဆိုသည်မှာ ဆောင်းပါးတစ်ခုအတွင်း သို့မဟုတ် ရုပ်ပုံ သို့မဟုတ် ဗီဒီယိုတစ်ခုအတွင်း၌ပင် ထူးခြားသည့်အသုံးအနှုန်းကို ဖော်ပြခြင်းဖြစ်သည်။ ကိုးကားချက်တစ်ခုသည် ထူးခြားသောပုဂ္ဂိုလ်၊ နေရာ သို့မဟုတ် အရာတစ်ခုဖြစ်သည်။ အကယ်လို့ Martech Zone လင့်ခ်မပါဘဲ အခြားဒိုမိန်းတွင် ဖော်ပြထားသော်လည်း အကြောင်းအရာမှာ စျေးကွက်ရှာဖွေရေးဖြစ်သည်၊ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော် ရှာဖွေရေးအင်ဂျင်သည် ဖော်ပြချက်အား ချိန်ဆပြီး ဤနေရာတွင် ဆောင်းပါးများ၏ အဆင့်သတ်မှတ်ချက်ကို တိုးမြှင့်မည်မဟုတ်ပေ။ ဟုတ်ပါတယ်။
လင့်ခ်နှင့်ကပ်လျက် အကြောင်းအရာ၏ ဆက်စပ်အကြောင်းအရာလည်း ရှိပါသည်။ သင့်ဒိုမိန်း သို့မဟုတ် ဝဘ်လိပ်စာကို ညွှန်ပြသည့် ဒိုမိန်းသည် သင်အဆင့်သတ်မှတ်လိုသည့် အကြောင်းအရာနှင့် သက်ဆိုင်မှုရှိပါသလား။ သင့်ဒိုမိန်း သို့မဟုတ် ဝဘ်လိပ်စာကို ညွှန်ပြသည့် နောက်ခံလင့်ခ်ပါသော စာမျက်နှာသည် အကြောင်းအရာနှင့် သက်ဆိုင်ပါသလား။ ယင်းကို အကဲဖြတ်ရန်အတွက်၊ ရှာဖွေရေးအင်ဂျင်များသည် ကျောက်ဆူးစာသားရှိ စာသားထက်ကျော်လွန်ကြည့်ရှုပြီး စာမျက်နှာ၏ အကြောင်းအရာတစ်ခုလုံးနှင့် ဒိုမိန်း၏ အခွင့်အာဏာကို ပိုင်းခြားစိတ်ဖြာရန် လိုအပ်သည်။
algorithms က ဒီနည်းဗျူဟာကို အသုံးချနေတယ်လို့ ယုံကြည်ပါတယ်။
စာရေးသူ- သေခြင်း သို့မဟုတ် ပြန်လည်မွေးဖွားခြင်း
လွန်ခဲ့သည့်နှစ်အနည်းငယ်က Google သည် စာရေးဆရာများအား ၎င်းတို့ရေးသားထားသော ဆိုက်များနှင့် ၎င်းတို့၏အမည်နှင့် လူမှုပရိုဖိုင်သို့ ပြန်လည်ထုတ်လုပ်ထားသော အကြောင်းအရာများကို ချိတ်ဆက်ခွင့်ပြုသည့် markup ကို ထုတ်ပြန်ခဲ့သည်။ စာရေးဆရာတစ်ဦး၏သမိုင်းကို တည်ဆောက်နိုင်ပြီး ၎င်းတို့၏ အခွင့်အာဏာကို သီးခြားအကြောင်းအရာများကို တိုင်းတာနိုင်သောကြောင့် ၎င်းသည် အလွန်အထင်ကြီးစရာကောင်းသော တိုးတက်မှုတစ်ခုဖြစ်သည်။ ဥပမာ မားကတ်တင်းအကြောင်းရေးတဲ့ ကျွန်တော့်ဆယ်စုနှစ်ကို ပုံတူကူးဖို့ဆိုတာ မဖြစ်နိုင်ပါဘူး။
Google က စာရေးဆရာကို သတ်ပစ်တယ်လို့ လူတော်တော်များများက ယုံကြည်ပေမယ့် သူတို့က markup ကိုပဲ သတ်ပစ်တယ်လို့ ကျွန်တော်ယုံကြည်ပါတယ်။ Google သည် စာရေးဆရာများကို အမှတ်အသားပြု၍ ခွဲခြားသတ်မှတ်ရန် ၎င်း၏ အယ်လဂိုရီသမ်များကို ရိုးရိုးရှင်းရှင်း တီထွင်နိုင်စေရန် အလွန်ကောင်းမွန်သော အခွင့်အလမ်းတစ်ခုဟု ကျွန်ုပ်ထင်ပါတယ်။
Link Earning ခေတ်
ရိုးရိုးသားသားပြောရရင်၊ အနက်ရှိုင်းဆုံးအိတ်ကပ်တွေနဲ့ ကုမ္ပဏီတွေက backlinks တွေထုတ်ဖို့ အရင်းအမြစ်အများဆုံးရှိတဲ့ SEO အေဂျင်စီတွေကို ငှားရမ်းထားတဲ့ ပေးရတဲ့ကစားတဲ့ခေတ်ရဲ့ နိဂုံးချုပ်သွားတာကို ကျွန်တော်ဝမ်းသာမိပါတယ်။ ကြီးမားသောဆိုက်များနှင့် မယုံနိုင်လောက်စရာ အကြောင်းအရာများကို ပြုစုပျိုးထောင်ရန် ကျွန်ုပ်တို့ ကြိုးစားလုပ်ဆောင်နေစဉ်တွင် ကျွန်ုပ်တို့၏ အဆင့်သတ်မှတ်ချက်များ အချိန်ကြာလာသည်နှင့်အမျှ ကျဆင်းသွားသည်ကို မြင်တွေ့ခဲ့ရပြီး ကျွန်ုပ်တို့၏ သွားလာမှု၏ သိသာထင်ရှားသော အစိတ်အပိုင်းကို ဆုံးရှုံးခဲ့ရသည်။
အရည်အသွေးနိမ့်သော အကြောင်းအရာ၊ မှတ်ချက် spamming နှင့် meta keywords များသည် ထိရောက်မှုရှိသော SEO Strategies များမဟုတ်တော့ဘဲ အကြောင်းပြချက်ကောင်းဖြင့်။ ရှာဖွေရေးအင်ဂျင် အယ်လဂိုရီသမ်များ ပိုမိုခေတ်မီလာသည်နှင့်အမျှ၊ ကြိုးကိုင်သည့်လင့်ခ်အစီအစဉ်များကို ရှာဖွေရန် (ဖယ်ထုတ်ရန်) ပိုမိုလွယ်ကူလာသည်။
SEO ဟာ အရင်က သင်္ချာပုစ္ဆာတစ်ခုလို့ လူတွေကို ဆက်ပြောနေပေမယ့် အခုတော့ အဲဒါကို ပြန်ဖြစ်လာပါပြီ။ လူတွေပြဿနာ. သင့်ဆိုဒ်သည် ရှာဖွေရေးအင်ဂျင်နှင့် အဆင်ပြေကြောင်း သေချာစေရန်အတွက် အခြေခံကျသော ဗျူဟာအချို့ရှိသော်လည်း၊ အမှန်မှာ အကြောင်းအရာကြီးသည် (ရှာဖွေရေးအင်ဂျင်များကို ပိတ်ဆို့ခြင်းအပြင်) တွင် ကောင်းမွန်စွာ ရပ်တည်နေပါသည်။ ကြီးမြတ်သောအကြောင်းအရာကို လူမှုရေးအရ ရှာဖွေတွေ့ရှိပြီး မျှဝေပြီးနောက် သက်ဆိုင်ရာဆိုက်များမှ ဖော်ပြကာ ချိတ်ဆက်ထားသည်။ အဲဒါက backlink မှော်ပဲ။
ယနေ့ခေတ် Backlinking Strategies
ယနေ့၏ backlinking ဗျူဟာများသည် လွန်ခဲ့သောဆယ်စုနှစ်များကကဲ့သို့ မမြင်ပါ။ နောက်ခံလင့်ခ်များရယူရန်၊ ကျွန်ုပ်တို့ အသကျမှေး အောက်ပါအဆင့်များကို အသုံးပြု၍ အလွန်ပစ်မှတ်ထားသော ဗျူဟာများဖြင့် ယနေ့
ဒိုမိန်းအာဏာပိုင် - ကဲ့သို့သောပလပ်ဖောင်းများကိုအသုံးပြုခြင်း။ Semrushကျွန်ုပ်တို့သည် တိကျသောသော့ချက်စာလုံးများကို ရှာဖွေဖော်ထုတ်နိုင်ပြီး သက်ဆိုင်ရာနှင့် အဆင့်ကောင်းမွန်သော ဦးတည်ရာဆိုက်များစာရင်းကို ရယူနိုင်ပါသည်။ ဤသည်ကို ယေဘုယျအားဖြင့် ရည်ညွှန်းသည်။ ဒိုမိန်းအခွင့်အာဏာ.
ဇာတိအကြောင်းအရာ - ကျွန်ုပ်တို့သည် ကျွန်ုပ်တို့၏ site သို့ backlinks များပါရှိသော ဦးတည်ရာဆိုက်အတွက် အင်ဖိုဂရပ်ဖစ်များ၊ အဓိက သုတေသနနှင့်/သို့မဟုတ် ကောင်းမွန်စွာရေးသားထားသော ဆောင်းပါးများအပါအဝင် အံ့သြဖွယ်ကောင်းသော သုတေသနပြုထားသော အကြောင်းအရာများကို ထုတ်လုပ်ပါသည်။
အဝေးရောက် - ကျွန်ုပ်တို့သည် ထိုထုတ်ဝေမှုများထံရောက်ရှိရန် လူထုဆက်ဆံရေးဗျူဟာကို ပေါင်းစပ်ထားပြီး ကျွန်ုပ်တို့၏အကြောင်းအရာကို မြှင့်တင်ရန် သို့မဟုတ် ၎င်းတို့၏ဆိုက်သို့ ဆောင်းပါးတစ်ပုဒ်တင်ပြရန် တောင်းဆိုပါသည်။ ထိုသို့လုပ်ဆောင်ရာတွင် ကျွန်ုပ်တို့၏စိတ်အားထက်သန်မှုနှင့်ပတ်သက်၍ ကျွန်ုပ်တို့ ပွင့်လင်းမြင်သာစွာရှိပြီး ကျွန်ုပ်တို့ပေးဆောင်သည့် ဆောင်းပါးအရည်အသွေး သို့မဟုတ် အင်ဖိုဂရပ်ဖစ်၏အရည်အသွေးကို မြင်သောအခါတွင် ထုတ်ဝေသူအနည်းငယ်က နောက်ခံလင့်ခ်ကို ငြင်းပယ်ပါသည်။
Backlinking သည် သင် outsource လုပ်နိုင်သည့် နည်းဗျူဟာတစ်ခု ဖြစ်နေဆဲဖြစ်သည်။ ၎င်းတို့၏ ဖြန့်ဝေမှုလုပ်ငန်းစဉ်နှင့် ဗျူဟာများတဝိုက်တွင် တင်းကျပ်သော လုပ်ငန်းစဉ်များနှင့် အရည်အသွေးထိန်းချုပ်မှုများပါရှိသော အလွန်အရည်အချင်းပြည့်မီသော ချိတ်ဆက်တည်ဆောက်ရေးဝန်ဆောင်မှုများ ရှိပါသည်။
backlink တစ်ခုအတွက် ပေးချေခြင်းသည် Google ၏ ဝန်ဆောင်မှု စည်းမျဥ်းစည်းကမ်းများကို ချိုးဖောက်ခြင်းဖြစ်ပြီး backlink တစ်ခုအတွက် (သို့မဟုတ် backlink တစ်ခုထားရန် ပေးချေခြင်း) ဖြင့် သင့်ဒိုမိန်းကို အန္တရာယ်ဖြစ်စေခြင်းမျိုး ဘယ်သောအခါမှ မပြုလုပ်သင့်ပါ။ သို့သော်လည်း backlink တစ်ခုတောင်းဆိုရန် အကြောင်းအရာနှင့် ဖြန့်ချီရေးဝန်ဆောင်မှုများအတွက် ပေးဆောင်ခြင်းသည် ချိုးဖောက်မှုမဟုတ်ပါ။
Outsourced Link တည်ဆောက်ခြင်းဝန်ဆောင်မှုများ
ကျွန်တော် သဘောကျဖူးတဲ့ ကုမ္ပဏီတစ်ခုပါ။ Stan Ventures. ၎င်းတို့၏စျေးနှုန်းသည် ဒိုမိန်း၏အရည်အသွေး၊ ဆောင်းပါးနှင့် သင်ရယူလိုသော ဆက်စပ်လင့်ခ်အရေအတွက်အပေါ် မူတည်၍ ကွဲပြားပါသည်။ ဦးတည်ရာဆိုက်ကိုပင် သင်တောင်းဆိုနိုင်သည်။ ဒါကတော့ ခြုံငုံသုံးသပ်ချက် ဗီဒီယိုပါ။
Stan Ventures သည် သင့်ကုမ္ပဏီစိတ်ဝင်စားနိုင်သည့် ပရိုဂရမ်သုံးမျိုးအား ပေးဆောင်ပါသည်။ ၎င်းတို့သည် အဖြူရောင်တံဆိပ်ဖြင့် စီမံထားသော SEO ဝန်ဆောင်မှုကိုလည်း ပေးဆောင်ပါသည်။
ချိတ်ဆက်တည်ဆောက်ခြင်းဝန်ဆောင်မှုများ Blogger Outreach ဝန်ဆောင်မှုများ SEO ဝန်ဆောင်မှုများကို စီမံခန့်ခွဲသည်။
ဤ infographic မှ Blast Blog တွင် သင့်ဆိုက်အတွက် အရည်အသွေးမြင့် လင့်ခ်များတည်ဆောက်နည်းကို အပ်ဒိတ်နှင့် စေ့စေ့စပ်စပ် ဖော်ပြချက်တစ်ခုဖြစ်သည်။
Tags: နောက်ကြောင်းပြန်နောက်ကြောင်းပြန်backlinking နည်းဗျူဟာwebsite ရဲ့ backlinkဘလော့ဂါဒိုမိန်းအခွင့်အာဏာinfographicအဆောက်အဦ infographic လင့်ခ်ချိတ်ဆက်ရှာဖွေခြင်း။လင့်များပေါက်ကွဲမှုဘလော့ဂ်တွင်အဝေးရောက်outsourced backlinkingpagerank algorithm ကိုstan ဖက်စပ်